ဘလွန်းဒီအောဆုပေးပွဲမှာ လီယွန်နယ်မက်ဆီ ကို ဗာဂျယ်ဗန်ဒိုက် အရေးနိမ့်ခဲ့မှု အပေါ် မှတ်ချက်ပေးလိုက်တဲ့ ယာဂန်ကလော့ - SPORTS MYANMAR
ဘလွန်းဒီအောဆုပေးပွဲမှာ လီယွန်နယ်မက်ဆီ ကို ဗာဂျယ်ဗန်ဒိုက် အရေးနိမ့်ခဲ့မှု အပေါ် မှတ်ချက်ပေးလိုက်တဲ့ ယာဂန်ကလော့
ဗာဂျယ်ဗန်ဒိုက် ဟာ မနေ့ညက ဘလွန်းဒီအော ဆုပေးပွဲမှာ ကပ်ပြီး အရေးနိမ့် ခဲ့ပေမယ့် ယာဂန်ကလော့ ကတော့ သူ့အသင်းသားဟာ ဒီဆုနဲ့ ထိုက်တန်တယ်လို့ ယူဆနေပါတယ်။ ဗာဒိုက်ဟာ မဲပေး ရွေးချယ်မှုမှာ ဒုတိယ နေရာ ရရှိ ခဲ့ပြီး ဘာစီလိုနာ icon လီယွန်နယ်မက်ဆီ ကတော့ ၆ ကြိမ်မြောက် ဘလွန်းဒီအောဆု ကို ပိုင်ဆိုင် သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဗန်ဒိုက် ရဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက စွမ်းဆောင်ထား မှုတွေကြောင့် ယာဂန်ကလော့ အပါအဝင် လူတော်တော်များများ ကတော့ ဒီဆုဟာ နယ်သာလန် နောက်ခံလူ နဲ့သာ ထိုက်တန်မှု ရှိတယ်လို့ ယူဆ နေကြပါတယ်။ ယနေ့ည အဲဗာတန် နဲ့ပွဲ မတိုင်မီ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ကလော့က သူ့ရဲ့ အမြင်ဟာ မဲပေးရွေးချယ် ခဲ့ကြတဲ့ ဂျာနယ်လစ်တွေနဲ့ အမြင် မတူဘူးလို့ ပြောသွားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လီဗာပူး အသင်းသား လေးဦး (ဗန်ဒိုက် ၊ မာနေး ၊ ဆာလား ၊ အလီဆွန်) အထိ ထိပ်ဆုံး ၁၀ ယောက် ထဲမှာ ပါဝင် နေတာကတော့ ယာဂန်ကလော့ အတွက် ဂုဏ်ယူစရာ ဖြစ်နေပြီး ဂျာမန်နည်းပြ ကတော့ သူ့ကစားသမားတွေ အနေနဲ့ ဒီရာသီ မှာလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက စွမ်းဆောင်ရည်မျိုးကို ထပ်မံ ပြသရန် စိန်ခေါ်မှု လုပ်လိုက်ပါတယ်။
မာဆေးဆိုက် ဒါဘီ ပွဲစဥ် မတိုင်မီ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ယာဂန်ကလော့ က “ဘလွန်းဒီအောဆု အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဂျာနယ်လစ်တွေ ချမှတ်ရတာ မဟုတ်လား? ဒါ့ကြောင့် ဒါဟာ ဒီလူတွေ မြင်တဲ့ ပုံစံပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ လုံးဝ ပြသနာ မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော် မြင်တဲ့ ပုံစံနဲ့တော့ အနည်းငယ် ခြားနား နေပါတယ်။ လူတော်တော်များများ ရဲ့ အမြင်နဲ့ အနည်းငယ် ခြားနား နေတာကတော့ သာမန်ကိစ္စ ပဲလို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ လီယွန်နယ်မက်ဆီ ဟာ ကျွန်တော်ရဲ့ ဘဝမှာ မြင်တွေ့ ဖူးသမျှ ထဲက အကောင်းဆုံး ကစားသမား တစ်ဦး ဆိုတာ ကျွန်တော် အကြိမ် ၅ သိန်းလောက် ပြောထား ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒါလိုမျိူးပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘဝ အစောပိုင်းမှာ ပီလီ ၊ ဘက်ကင်ဘောင်ဝါ ၊ မာရာဒိုနာ တို့ကို မြင်တွေ့ ခဲ့ဖူးပြီး အဲဒီနောက် မက်ဆီ ကစားတာကို သူတို့ထက် ပိုမို မြင်တွေ့ ခဲ့ရပါတယ်။
အခြားသူတွေလည်း ယခုခေတ်မှာ ဘယ်လို ကစား သွားမလဲ ဆိုတာတော့ ကျွန်တော် မသိပါဘူး။ သူတို့တွေလည်း အရမ်းကို ထူးချွန်စွာ ကစား နိုင်လောက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုခေတ်မှာ မက်ဆီ ရှိနေပါတယ်။ သူဟာ ဘလွန်းဒီအောဆု ကို ၆ ကြိမ် ဆွတ်ခူး ထားခဲ့ပြီး ရော်နယ်ဒို ကတော့ ငါးကြိမ် ရထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရာသီတစ်ခုတည်း အကြောင်းကို ပြောမယ် ဆိုရင် ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက နောက်ခံလူ တစ်ဦး ဒီလောက် ကောင်းအောင် ကစား ခဲ့တာကို ကျွန်တော် လုံးဝ မတွေ့ ဖူးခဲ့ပါဘူး။ အကယ်၍ ဗာဂျယ်သာ ဒီဆုကို ရခဲ့မယ် ဆိုရင် ဒါဟာ မှန်ကန်တဲ့ အရာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။ အခု ကျွန်တော် ကြားတာက မဲအရေအတွက် သိပ်မကွာဘူး လို့ပါ။ ပွဲအပြီးမှာ ဗာဂျယ် ပြောခဲ့တဲ့ စကားဟာ သူဘယ်လို ပုဂ္ဂိုလ် လဲ ဆိုတာ ပြသလိုက်တာပါပဲ။ အရမ်း ကောင်းပါတယ်။
ကစားသမား အစုအဖွဲ့နဲ့ ပြောမယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား ဆွတ်ခူး ခဲ့တယ်။ တစ်ရာသီလုံး ထူးချွန်စွာ ကစားခဲ့ပြီး လိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ ၉၇ မှတ်ထိ ရခဲ့ပါတယ်။ ဒီလူတွေ ဒီလို မြင်တာ ကတော့ သာမန်ပါပဲ။ ကျွန်တော် သူတို့အတွက် ပျော်ရွှင် မိပါတယ်။ အလက်ဇန်းဒါးအာနိုး ဟာ နံပါတ် ၁၇ နေရာ ရခဲ့လား မသိဘူးနော်? လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်က သူဒီအဆင့် ရောက်လာမယ်လို့ ဘယ်သူ ထင်ထားခဲ့မှာလဲ? ဒါ့ကြောင့် ဒါအရမ်း ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီကပါ။ အခု ပေးရမယ့် ဆုတော်တော်များများ ပြီးသွားပြီလို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ ကောင်လေးတွေ အနေနဲ့ ဒါတွေ လိုချင်တယ် ဆိုရင် ဆုအသစ်တွေ အတွက် ကြိုးစား နိုင်ပါတယ်။” လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။